Event Archives – An Online Entertainment News Portal
‘मिसेस नेपाल ग्ल्याम २०१९’का १७ प्रतियोगी प्रशिक्षणको मैदानमा छन् । अन्तिम स्पर्धामा शिर्ष उपाधि जित्ने उदेश्य सहित उनीहरु प्रतिभा निखार्न प्रशिक्षणमा जुटेका हुन् । प्रशिक्षका क्रममा उनीहरुले सञ्चार कला, विकास मोटिभेसन, लिडरसिप, ड्रेङ सेन्स, पब्लिक […]
विवाह पछि महिलाहरु घर तथा कार्यालयको काम काजमा सिमित हुनुपर्ने अबस्था छ । तर यो अबस्थाबाट माथि उठाएर सेविब्रेटी समेत बनाउन यल मिडियाले गतवर्षबाट मिसेस नेपाल ग्रान्ड आयोजना गर्दै आएको छ । यसरी विवाहित महिलाहरुको […]
‘नेपाल्स स्टार मोडल २०१९’कालागि ११ प्रतियोगी छानिएका छन् । सिद्धि मिडियाको कार्यलय कुलेस्वरमा आयोजित पहिलो चरणको अडिसनबाट यी प्रतियोगी अन्तिम स्पर्धाका लागि छानिएका हुन् । १६ देखि ४० वर्षसम्मका विवाहित, अविवाहित महिला तथा पुरुषले सहभागिता […]
April 1, 2019 Tulasa Karki 0
काभ्रेको बनेपामा आयोजित नाट्यश्वर म्युजिक अवार्ड २०७५ भब्यताको साथ् सम्पन्न भएको छ । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवको प्रमुख आतिथ्यमा भब्य रुपमा अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा यादवले भाषा सस्कृति तथा […]
March 25, 2019 Tulasa Karki 0
सौन्दर्य प्रतियोगिता लगायतका इभेन्ट आयोजना गर्दै आएका आयोजकहरुले डेढ दशकभन्दा बढी समयखेखि विभिन्न सौन्दर्य प्रतियोगीता आयोजना गर्दै आएका एएनपी मिडिया हाउसका प्रबन्ध निर्देशक लबवहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम ब्यवस्थापन संघ नेपाल गठन गरेका छन् । पेशागत […]
भारद्वाज संस्कृति सम्वद्र्धन केन्द्रको चौथो महासभा सम्पन्न भएको छ । गत शनिवार लाजिम्पाटस्थित डिल्लीरमण रेग्मी प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा सम्पन्न महासभाले डा. शास्त्रदत्त पन्तको नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मतले चयन गरेको छ । सो कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा डा. फत्तेबहादुर […]
युरोपको लातभियाको रिगा शहरमा आयोजना हुने अन्तराष्ट्रिय सौदर्य प्रतियोगिता ‘मिसेस् टप अफ द वल्र्ड २०१९’मा नेपालको प्रतिनिधित्व अलिना तुलाधरले गर्ने भएकी छन् । ‘मिसेस् टप अफ द वल्र्ड २०१९’का लागि आधिकारीक प्रतिनिधि पठाउने संस्था ईप्लानेट […]
‘म्याक्स टिभी एसइइ डान्स च्याम्पियनशिप’ आयोजना हुने भएको छ । एसइइका विद्यार्थीहरुलाई ठूलो मञ्च र अवसर प्रदान गर्ने उद्धेश्यले च्याम्पियनशिप आयोजना गर्न लागिएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराइएको हो । नृत्य मनोरञ्जनको साधन मात्र […]